Momba anay - Huai'an Aide Hydraulic Machinary Co., Ltd.
Huai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.dia miorina ao Huai'an ary naorina tamin'ny 2011. Ny tena vokariny dia be mpampiasa amin'ny injenieran'ny injeniera, fanodinana entana sy ny fikirakirana, lozisialy ary ny sehatry ny milina mifandraika amin'ny fiara. Orinasa mpamatsy vola iompanana manokana amin'ny famokarana paompy fitaovam-piadiana, tariby misy herinaratra hydraulic, valves hydraulic, sivana, varingarina ary rafitra hydraulic. Ny vokatra dia AC type A, C, DC type D, C. Faritra fampiharana lehibe: fiakaran'ny fiara, forklift, stackers elektrika, sehatra fampiakarana, fantson-drano, kamiao fako. Nandritra ny taona maro, dia nanolotra serivisy fanohanana ho an'ny fitaovana milina, fiara, fitaovana fikojakojana fiara, mpitaingina fitaovana, fitaovana lozisialy, milina fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, angadin'omby, mpamaky hazo, sehatra fananganana ary indostria hafa. Ho fanampin'izany, ny orinasa koa dia manokana amin'ny famokarana sy ny ambongadiny amin'ny takelaka valizy misy solika isan-karazany, izay namboarina sy namboarina tamin'ny alalàn'ny alim-bary alimina alim-bary avo lenta, teknolojia manadio firaka ary teknolojia fitsaboana hafanana.
Miavaka ny kalitaon'ny vokatra. Ny vokatra vokarin'ny orinasa dia paompy fanerena tosika avo lenta sy paompy kely, paompy indroa, herinaratra AC ary DC, izay avo lenta iraisam-pirenena. Tsy amidy any amin'ny tanibe China sy Taiwan fotsiny izy ireo, fa aondrana any Etazonia, Canada, Ireland, Italia ary tsena iraisam-pirenena hafa.
Ny asan'ny orinasa dia ny manome endrika sy famokarana rafitra hydraulic isan-karazany ho an'ny mpanjifa samihafa. Anisan'izany ny tobin'ny paompy hydraulic, valves fanaraha-maso isan-karazany sy valves cartridge ary ny hafa manohana sy mivory. Fahombiazana avo, fanjifana angovo ambany.
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny filozofian'ny orinasa "Professionalism-Excellence", "Quality-Supreme", "Innovation-Refining and Transformation", ary "Integrity-One Heart". Ny mamorona ho avy miroso miaraka amin'ny mpanjifa no hany tanjontsika.
Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso sy fomba fitiliana feno, ary nanangana rafitra fitantanana kalitao tsara.
Ny lalànan'ny orinasa: kalitao hahavelomana, haingam-pandeha ho an'ny fampandrosoana, zava-bita matihanina amin'ny ho avy.
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny filôzôfia tsotra momba ny "Quality's Today, Tomorrow's Market", ary ny mpiasan'ny Aide rehetra dia hanohy hanompo ny mpanjifa amina vokatra avo lenta.
Tongasoa namana avy amin'ny sokajin-javatra rehetra hitsidika sy hijery ny orinasanay, misaotra anao amin'ny fahatokisanao sy ny fanohananao